विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान नियुक्त
काठमाडौं–सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा...}
थ्री स्टार हाइड्रोपावरले आईपीओ जारी गर्ने
काठमाण्डौं– थ्री स्टार हाइड्रोपावर लिमिटेडले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । थ्री स्टारले १२ करोड ३१ लाख २५ हजार रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेको छ । धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएमा यो कम्पनीले १००...}
सौर्य विुद्यत उत्पादक संघको स्थापना दिवस सम्पन्न
काठमाडौं–नेपाल सौर्य विुद्यत उत्पादक संघले विविध कार्यक्रम सहित २१ औं स्थापना दिवस मनाएको छ । स्थापना दिवसको अवसरमा वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसूदन अधिकारीले उज्यालो नेपाल कार्यक्रममा संघले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । नेपाल सौर्य विुद्यत उत्पादक संघका अध्यक्ष ईन्...}
मैलुङखोला जलविद्युतको आईपीओ आज निष्कासन, कति कित्ता दिने आवेदन ?
काठमाण्डौं –पुँजी बजारमा एकपछि अर्को कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गरेका छन् । मैलुङखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले आज (साउन १४ गतेबाट) सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गरेको छ । कम्पनीले ७ करोड ३६ लाख २८ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको हो । प्रतिकित्ता अंकि...}
मोलुङ्ग हाइड्रोपावरले सवा ३५ करोडको आईपीओ निष्कासन गर्ने
काठमाण्डौ–पुँजी बजारमा अर्को कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । मोलुङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सवा ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । मोलुङ्ग हाइड्रोपावरले ३५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । धितोपत्र बोर्...}